Tononkira ho an'ny Instagram: ny fomba fanovana ny tantara Instagram sy bebe kokoa | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Tambajotra sosialy
Ny kaonty Instagram anay raha hikarakara izany amin'ny emojis izahay ary rohy dia azontsika avela tsara izy io, fa raha mampiasa taratasy ho an'ny Instagram isika, amin'ireo manokana ireo dia afaka manome izany miavaka sy manokana ho fanavahana ny tenantsika amin'ireo olona an'arivony isika.
Haneho anao ny karazana litera tany am-boalohany azonao ampiasaina sy ny fomba ahafahantsika "mametaka" an'io endritsoratra io mba hiseho ao amin'ny kaontinay Instagram ary amin'izany fomba izany no tsara indrindra amin'ireo sakaiza sy mpiara-miasa aminay.
1 Fangatahana hanovana litera ao amin'ny Instagram
1.1 Endri-tsoratra mahafinaritra ho an'ny Instagram
1.2 Endri-tsoratra mahafinaritra - Lahatsoratra mahafinaritra
1.3 Endri-tsoratra mahafinaritra ho an'ny Instagram
1.4 Text Font Generator - Encode Messages
2 Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra amin'ny Instagram Stories
2.1 Amin'ny alàlan'ny fampiharana Instagram mihitsy
2.2 Amin'ny alàlan'ny Animoto
2.3 Amin'ny alàlan'ny Adobe Spark
Fangatahana hanovana litera ao amin'ny Instagram
Misy andiana fitaovana tsara ahafahana manova ny litera amin'ny Instagram. Tena vitantsika izany maka tahaka lahatsoratra avy amin'ny tranokala ary apetaka ao amin'ny mombamomba anay manokana. Mitandrema hatrany fa rehefa averintsika indray ny pejy dia hitohy amin'ny endriny fanoratana ihany ary tsy hisy tarehin-tsoratra hafahafa. Manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hanandramanao azy amin'ny solosaina PC, satria mety hiteraka olana indraindray amin'ny kinova desktop, fa ny kinova finday kosa tsy.
Hanome anao lisitry ny rindranasa izahay hahafahanao manova ny fomban'ny mombamomba anao. Raha ny tena izy, Ny fanaovana izany amin'ny solosaina dia mety ho tsara kokoa aminao raha zatra mampiasa touchpad na totozy ianao. Haneho anao ny fampiharana tsara indrindra izahay hanovana litera Instagram.
Endri-tsoratra mahafinaritra ho an'ny Instagram
Ity fampiharana ity no manana isa tsara indrindra ary ilay iray izay noraisina tamin'ny fomba tsara indrindra avy amin'ny vondron'olona mpampiasa Instagram. Raha mila endritsoratra isan-karazany ianao dia hanana an'ity fampiharana ity satria manana endritsoratra manokana mihoatra ny 140 izy. Miaraka amin'ity andian-dahatsoratra ity, ankoatry ny famoronana mombamomba anao manokana, azonao atao ny mamorona sary kanto sy emoji amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo endritsoratra.
Endritsoratra manokana dia mifototra amin'ny Unicode ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa toy ny mailaka izy ireo. Ny fampiasana Unicode dia midika fa tohanan'ny sehatra lehibe ankehitriny: Android sy iOS. Tsy mila manoratra fotsiny ny hafatra ianao ary mandika azy io. Avy eo ianao dia mankany amin'ny Instagram ary apetaho ao amin'ny piraofilina na koa amin'ny famoahana.
Raha ny marina, ity app ity dia mety ho tonga lafatra amin'ny fampiasana tsy tapaka amin'ny Instagram. Raha te hanoratra hevitra, famoahana na bio ianao, dia afaka manao izany amin'ny fotoana rehetra, satria ny traikefa omeny dia mihoatra ny tonga lafatra. Manana izany amin'ny Android ianao.
Sintomy amin'ny Android - Endri-tsoratra mahafinaritra ho an'ny Instagram
Endri-tsoratra mahafinaritra - Lahatsoratra mahafinaritra
Manana an'ity app ity izahay samy amin'ny Android sy iOS, ary anisan'ireo nahazo isa betsaka indrindra. Azontsika ampitahaina amin'ny teo aloha izy io, ka ho lasa tsiro sy traikefa. Manoro hevitra anao foana izahay ny hanandrana azy io alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra, satria ny iray amin'izy ireo dia mety ho tsara kokoa aminao ny hamokatra ao anatin'ny fotoana fohy.
Ity fampiharana ity dia fitaovana iray manova ny lahatsoratra mahazatra ho lasa voahaingo tsara ary manampy antsika koa hamorona ireo tandindona mahafinaritra ireo. Ny maha izy azy dia mpamokatra taratasy zavakanto. Afaka mampiasa azy ianao amin'ny karazana tambajotra rehetra, na dia amin'ny WhatsApp aza.
ihany mila manoratra ny lahatsoratra ianao, mametraka ny style ary mandika azy hitondra azy amin'ny fampiharana hafa ary apetaho.
Sintomy amin'ny Android - Endri-tsoratra mahafinaritra - Cool Stylish Fancy
Sintomy amin'ny iPhone - Endri-tsoratra mahafinaritra, maodely mahafinaritra, mpamorona lahatsoratra milay
Izahay koa manana an'ity fampiharana ity amin'ny sehatra roa. Fa ny mampihomehy dia amin'ny iOS dia misy hevitra tsara kokoa ary naoty avy amin'ny fiarahamonina. Toy ny roa hafa dia tompon'andraikitra amin'ny famadihana ny lahatsoratra mahazatra ho karazana karazana endri-tsoratra.
Miasa toy izany koa: manoratra, mandika ary mametaka izahay ao amin'ny tambajotra sosialy voafantina. Ny iray amin'ireo kileman-toetrany, ary misy koa ao amin'ny kinova Android, dia ny fangatahany ny mpampiasa indraindray hitsidika ny tranonkala. Inona no mety hampikorontana.
Sintomy amin'ny iOS - Cool Font ho an'ny Instagram
Text Font Generator - Encode Messages
Ity fampiharana ity dia natokana ho an'ny famoronana lahatsoratra amin'ny unicode fotsiny, izay midika fa afaka miditra amina endritsoratra isan-karazany, marika tsy fahita firy, haingon-trano ary hafatra misy encrypt miaraka amina encryption ianao. Natokana tsotra izao amin'ny famoronana lahatsoratra, ka tsy hahita bebe kokoa.
Mazava ho azy, ho fanampiana be dia be ny manampy lahatsoratra tena tsara amin'ny tantaram-piainana, Tantara Instagram, hafatra na faritra amin'ny fampiharana Instagram ahafahanao manoratra. Tsy misy ho an'ny firenena rehetra izy io, ka jereo raha afaka mametraka azy ianao.
Sintomy amin'ny Android - Text Generator Encode Hafatra
Manana an'ity fampiharana ity amin'ny Android sy iOS izahay ary hanompo antsika mihitsy aza ny manampy lahatsoratra mivantana amin'ny fampiharana hafa toy ny WhatsApp. Izy io dia mirakitra karazana fomba maro, safidy lohahevitra ary tandindona tsy fahita firy.
Tsotra sy tsotra, fa tena ilaina amin'ny habetsaky ny safidy anananao. Ny iray amin'ireo zavatra manasongadina azy dia ny ananantsika amin'ny sehatra roa, koa raha manana iPad sy fitaovana Android ianao, raha zatra izany dia ampiasainao foana hamoronana ireo lahatsoratra manokana ho an'ny Instagram.
Sintomy amin'ny Android - Stylish
Sintomy amin'ny iOS - Stylish
Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra amin'ny Instagram Stories
Ny tantara Instagram Izy ireo no betsaka indrindra ary mila mijery manodidina anay fotsiny ianao rehefa mandeha lamasinina isika, na amin'ny bus any an-tanàna lehibe. Ny tsirairay dia mampiasa sy milalao azy ireo hahitana hoe amin'ny firy amin'ny fiainany no nizara ny mpiara-miasa aminy, ny namany, tsy dia ny namana sy ny mpanaraka azy.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana Instagram mihitsy
Hampianatra anao izahay ny fomba fanovana ny endritsoratra amin'ny Tantara Instagram avy amin'ny fampiharana mihitsy. Rehefa miatrika ny safidy ahafahantsika mampakatra horonan-tsary miovaova ao anaty fampiharana fanovana, toa ny Adobe Premiere CC, na koa avy amin'ny PC misy ireo programa fanovana mahazatra indrindra dia manomboka amin'ny safidy mora indrindra izahay. Avy eo dia asehonay fampiharana iray ianao hanovana avy amin'ny findainao ary hampakatra azy ireo.
Manokatra tantara Instagram voalohany izahay.
Mampakatra sary izahay, manamboatra iray vaovao na inona ...
Tsindrio ny kisary eo amin'ny zoro ambony ankavanan'ny lahatsoratra.
Manoratra lahatsoratra izahay.
Tsindrio izao ny tapany ambony, eo afovoany mihitsy mba hifamadihana eo amin'ireo endritsoratra 5 samihafa atolotry ny Instagram: kilasika, maoderina, neon, milina fanoratana ary sahy.
Efa manana ny endritsika miaraka amina typeface manokana izay manampy ny marika manokana na ny orinasa iasantsika.
Amin'ny alàlan'ny Animoto
Con Animoto dia azontsika atao ny miditra amina endritsoratra endritsoratra 36 be dia be Anisan'izany ny calligraphic, kanto, serifs, sans, sahy, tsara ary maro hafa. Miatrika mpamoaka horonantsary malaza be izahay izay azonay ampiasaina amin'ny tanjona hafa, saingy ny kalitao lehibe dia ny hoe efa tonga miaraka amin'ny endrika Instagram Stories ahafahana mamorona azy ireo amin'ny finday; Izany hoe, afaka mandeha amin'ny PC-tsika isika mba hamorona izany Instagram Stories tonga lafatra izany.
Nosintominay voalohany ny Animoto ho an'ny Android, na dia tsy maintsy lazaina aza fa tsy misy izany any amin'ny firenena rehetra.
Ho an'ny iOS dia eto ny rohy mankany amin'ny App Store: misintona amin'ny App Store
Misafidy modely ho an'ny Tantara izahay ary mampakatra sary na horonan-tsary.
Azontsika atao ny manova ny loko sy ny zavatra hafa amin'ny sary famantarana, ny marika ary maro hafa.
Manampy lahatsoratra izahay ary afaka misafidy karazana endritsoratra toa an'i Montserrat, Roboto, Lato, Aleo Bold ary maro hafa.
Manova ny loko izahay ary hanana ny endritsoratra miova ho an'ny Instagram Stories
Amin'ny alàlan'ny Adobe Spark
Ny fampiharana Adobe hamoronana atiny multimedia amin'ny tambajotra sosialy Mihoatra noho ny lavorary kokoa izy io. Manana izany amin'ny Android roa izahay toy ny amin'ny iOS, dia hanana izany zavatra niainanao izany ianao amin'ny finday rehetra.
Hanaraka ireo dingana mitovy amin'ny Animoto izahay. Izany hoe, mifantina ny modely Instagram Stories izahay, mifidy ny sary izahay ary afaka mampiasa endritsoratra maro karazana ananan'i Adobe Spark. Tahaka ny ahafahantsika mampiasa endrika, vokany, loko ary maro hafa. Ny olana amin'ny fanandramana ireo fampiharana samihafa sy ny fisafidianana izay mety indrindra amin'ny fombantsika na izay tadiavintsika.
Sintomy ny Adobe Spark: amin'ny Android/ amin'ny iOS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Hizatra Instagram
Sary famantarana, endritsoratra, ebooks, lohahevitra ary maro hafa maimaim-poana ao amin'ny FreebiesByPeople